🥇 Inkqubo yokuthengisa iimpahla
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 875
Ividiyo yenkqubo yokuthengisa iimpahla
Odola inkqubo yokuthengisa iimpahla
Ukuthengisa evenkileni -uhlobo oluthile lomsebenzi onxulumene nokuthengiswa kweempahla ezithile-izinto ze-asethi (amaxesha amaninzi iimpahla, amaxesha amaninzi izihlangu, izixhobo, njl. Ukwenza i-Akhawuntingi kuhlala kubandakanya ukugcina zonke iintlobo zeerekhodi ngesabelo esikhulu seerekhodi zesitokhwe kunye nentengiso. Eyona ndlela inokuthenjwa kunye neyona ilula yokwenza inkqubo yevenkile isebenze ngokupheleleyo yinkqubo yokuthengisa iimpahla. Inkqubo nganye yokuthengisa iimpahla yenzelwe ukuba iququzelele umsebenzi wenkampani yorhwebo, ikhawulezise inkqubo yokulungisa idatha kunye nokwenza izinto ngendlela eyiyo, kunye nokulungisa ukuhamba komsebenzi (ngakumbi umsebenzi wesebe lokuthengisa). Abanye abaphathi, becinga ukuba bafumene indlela yexabiso eliphantsi yokuthenga inkqubo yokuthengisa iimpahla, bathathe isigqibo sokukhuphela inkqubo yokuthengisa iimpahla kwi-Intanethi ngokubuza inkqubo yokukhangela indawo yokuthengisa ukuze uthengise iimpahla simahla okanye iinkqubo zokuthengisa iimpahla simahla. Kuya kucaciswa ukuba le ndlela yokujongana nengxaki ayilunganga kwaphela kwaye ayinakuphelisa kuphela ukuzithemba kwakho kwiinkqubo ezizenzekelayo zokubala, kodwa ikwakhokelela ekulahlekelweni kolwazi. Inyani yile yokuba ayizizo zonke iinkqubo eziza kukhathalela ulondolozo lwenkqubo yasimahla yokuthengisa ukulawula ukuthengiswa kwempahla (kwaye ukuba kunjalo, ngaphandle kwesikhuthazo semali), kwaye le mfuno yenkxaso yobuchwephesha kungekudala okanye kamva iya kuba ngokuqinisekileyo ukuvela. Ngamanye amagama, zonke iingcali zincoma kuphela inkqubo yokuthengisa ethengwe kubaphuhlisi abathembekileyo.
Inkqubo ethembekileyo yokuthengisa iimpahla kunye nolawulo lokugcina-i-USU-Soft. Le nkqubo yokuthengisa iimpahla inezinto ezininzi eziluncedo kunee-analogue zayo kwaye iyakwazi ukubonisa iziphumo ezilungileyo ngokukhawuleza okukhulu. Ibonakaliswa ngumgangatho ophezulu wokwenza, ukusebenziseka lula, iindleko zohlahlo-lwabiwo mali kunye nenkqubo yolondolozo efanelekileyo. Abaphuhlisi be-USU-Soft banophawu lwentembeko yamazwe aphesheya iD-U-N-S, engqina ukwamkelwa kwale nkqubo yokuthengisa yolawulo lweempahla kwihlabathi liphela njengenye yeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngokuthengisa iimpahla. Inkqubo yokuthengiswa kwempahla ekunceda ukuba uququzelele ukuthengiswa kweempahla ikuvumela ukuba ungasebenzisi kuphela izixhobo ezisemgangathweni kwivenkile (ivenkile kunye nendawo yokugcina izinto - izikena zebhakhowudi, iiprinta zerisithi, iilebhile, njl.), Kodwa isixhobo esitsha ngokupheleleyo, ekungezizo zonke iivenkile ezinazo ngoku - iiterminal zokuqokelelwa kwedatha yanamhlanje (DCT). Esi sisixhobo esincinci, esi umqeshwa asiphatha nje epokothweni kwaye asisebenzise xa kufuneka njalo. Umzekelo: ukwenza uluhlu lwempahla, uyayisebenzisa kwaye ugcine ixesha elininzi. Idatha ifundwa kwaye emva koko idluliselwe kwindawo yogcino lwedatha. Isixhobo sikwazi ukugcina isixa esithile sedatha, esidibanisa ngokudibeneyo. Ke, nokuba zininzi kakhulu izinto kwindawo yokugcina izinto, ungazongeza zonke kwiziko ledatha kwaye namandla okugcina kwenkqubo yokuthengisa accounting ayinamda.
Ukusebenza kunye nabaxhasi kukwafanele ukunikwa ingqalelo ekhethekileyo. Ulwazi malunga nabaxhasi lungeniswa ngqo kwidesika yemali. Umzekelo, ungena kwinkqubo yobalo yokuthengisa kunye nolawulo lweodolo igama, ifani, igama lomenzi wesicelo, kunye nokuba mdala kangakanani, ukuba unqwenela, ukuthanda kwakhe njalo njalo. Umthengi ngamnye unikwa iibhonasi ngentengo nganye. Sicinga ukuba akukho sizathu sokuchaza ukuba yeyiphi na inkqubo yebhonasi, kuba zonke iivenkile kudala zisebenzisa esi sicwangciso sokutsala nokugcina abathengi. Bambalwa abantu abanokumelana nethuba lokusebenzisa ezi bhonasi ziqokelelweyo endaweni yemali kwaye bathenge iimpahla ezininzi kwivenkile yakho. Uya kubona ukuba zeziphi izinto ezithengiweyo ngumthengi kwaye ufumana iibhonasi. Ke, uyakuqonda ukuba ukhetha ntoni kwaye ke uthumela intengiso kwaye uthembisa ukuthenga enye into, umkhuthaze ukuba asebenzise nangakumbi. Abathengi banokwahlulwahlulwa ngokwamacandelo ukwenza ukuba kube lula ukuhamba ngesiseko sedatha esikhulu esinolwazi malunga nenani elikhulu labathengi. Ulawulo lwabathengi luyimfuneko kuwo nawuphi na umbutho weshishini.
Eli candelo linokusekwa kwiikhrayitheriya ezahlukeneyo: ngokusekwe kwinani lotyelelo (kubathengi abaqhelekileyo nabanqabileyo); Ngokusekwe kubukho okanye ukungabikho kwezikhalazo (kwabo bangaze bakhalaze kunye nabo bahlala bezenza ngalo lonke ixesha); ngokusekwe kukuthenga okuthile, kubudala, kwisitalato sokuhlala, njl. njl. Abanye abathengi kufanelekile ukuba banikwe inqanaba le-VIP nawo onke amalungelo abawadingayo. Kwaye ukuhlala unxibelelana nabathengi bakho, ungasebenzisa iindlela ezi-4 zonxibelelwano- iViber, iSMS, i-imeyile kunye nokufowuna ngelizwi. Ungathumela iintengiso, iikhathalogu, izibonelelo ezizodwa, izaphulelo, okanye ukumema iminyhadala, ukuvuyisana neeholide, enkosi ngokuthenga, ukwazisa malunga nokufika kweempahla nokunye okuninzi.
Ngaba uyafuna ukunqanda iimpazamo xa usebenza neemveliso kunye neentengiso? Ngaba ufuna ukushenxisa omnye wemisebenzi ebemdaka kumatshini onokuwuphatha ngcono kwaye ngokukhawuleza? Ngaba ufuna ukwandisa ishishini lakho kakhulu kangangokuba abo ukhuphisana nabo baya kuba semva kakhulu? Emva koko zive ukhululekile ukukhetha inkqubo yethu yokuthengisa yolawulo kunye nokuzenzekelayo. Siqinisekisa konke oku, nangaphezulu. Sisebenzise ukothusa abathengi bethu. Kwiwebhusayithi yethu esemthethweni uyakufumana lonke ulwazi oludingayo, kwaye ube nakho ukukhuphela ingxelo yasimahla yokuyifaka kwinkampani yakho kwaye ujonge ukuba yonke into esikuxelela yona iyinyani okanye hayi. Siyakuqinisekisa ukuba inkqubo yethu eyodwa yokuzienzekelayo kunye nokuphucula ishishini ngekhe kukudanise kwaye ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuqhubeka nokuyisebenzisa! Nxibelelana nathi nangayiphi na indlela othanda ngayo. Sisoloko sinxibelelana kwaye siya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo.